Phumula ekamelweni lakho elinendawo yokubhukuda yangasese e-Tulum - I-Airbnb
Phumula ekamelweni lakho elinendawo yokubhukuda yangasese e-Tulum
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Miroslava
Ikamelo elihle, elitholakala esitezi sesithathu, liqukethe umbhede omkhulu, indlu yokugezela egcwele eyi-1, enesibuko kusinki, ayiphumi esithombeni kodwa inesibuko. isikrini se-TV, i-microwave oven, i-minibar, ikhabethe, ithala elikhulu elinombono ohlaba umxhwele, indawo yokubhukuda yangasese engenawo umshini wokushisisa, izindawo zokuphumula zelanga, itafula nezihlalo ezimbili. I-air conditioning ne-fan. Ukupaka imoto eyodwa, namabhayisekili amabili ongawasebenzisa ngesikhathi sokuhlala kwakho, mahhala.
Itholakala ngaphakathi kwentuthuko ye-boutique equkethe amayunithi angu-6 kuphela, ithokomele kakhulu. Kutholakala emaminithini angu-25. ngebhayisikili, ukusuka ebhishi nendawo yezindawo zokudlela nama-bar.
4.83 · 102 okushiwo abanye
I-Tulum yaziwa ngamanxiwa ayo ase-Mayan, asogwini loLwandle lwe-Caribbean, ngamabhishi ayo amahle olwandle oluhlaza okwesibhakabhaka. I-Sian Ka'an Biosphere Reserve, isayithi ye-UNESCO World Heritage. Ine-Cenotes eziningi ezihlaba umxhwele! Izindawo zokudlela ezihlukahlukene, lapho ungathola khona ukudla kwendawo okuvamile nokudla kwasemazweni angaphandle. Ungaphuthelwa ithuba lakho lokwazi le ndawo enhle, ngeke uzisole.
Angihlali endaweni kodwa sinomuntu amahora angu-24 ngosuku ngalokho okunikezwayo futhi ngisevisi yakho ngocingo noma nge-whatsapp.
Uma kungenzeka, ngizojabula ukuba khona ukuze ngihlangane nawe.